Ny valim-bolan'ny Apple amin'ny telovolana faharoa 2016 | Avy amin'ny mac aho
Navoaka ny valin'ny telovolana Apple
Apple androany dia nanambara ny valim-bola ho an'ny telovolana faharoa (telovolana voalohany) 50,6 miliara dolara miaraka amin'ny tombony isam-telovolana 10.5 miliara, na izay mitovy, amin'ny 1.90 dolara isaky ny zara. Raha apetratsika amin'ny fomba fijery dia nihena ny fihenan'ny Apple, satria tamin'io telovolana 2015 io ihany dia nahazoana vola 58 miliara dolara miaraka amin'ny tombom-barotra 13.6 miliara, na 2,33 dolara isaky ny zara.
Ity no "fidinana ambany" voalohany ho an'ny Apple hatramin'ny 2003, na izany aza tsy midika hoe ratsy izy io fa ny taha marobe mahatratra 39,4% raha oharina amin'ny 40,8% tamin'ny taona lasa.
Ho fanampin'ny fitomboan'ny fandoavana dividend, nilaza i Apple fa hampiakatra ny fetra amin'ny fividianana anjara amin'ny $ 50 miliara ary nilaza ny orinasa fa antenaina izany mandany vola maherin'ny 250 tapitrisa eo ambanin'ny fandaharan'asa fiverenan'ny fananana farany tamin'ny martsa 2018.
Mikasika ny varotra dia nahatratra ny orinasa apetraka amin'ny fizarana iPhone 51,1 tapitrisanandritra ny telovolana, nidina tamin'ny 61,2 tapitrisa tamin'ny taona lasa, raha toa ka 4,03 tapitrisa tapitrisa kosa ny varotra Mac raha oharina amin'ny 4,56 tapitrisa tamin'ny telovolana tamin'ny taona lasa. Nihena koa ny varotra IPad, nihena hatramin'ny 12,6 tapitrisa tamin'ny telovolana faharoa ka hatramin'ny 2015 tapitrisa androany.
Araka ny filazan'i Tim Cook, Apple CEO:
Ny ekipanay dia manao zavatra tsara na dia nahazo angon-drakitra makroekonomika ratsy aza. Faly be izahay amin'ny fitomboan'ny fidiram-bolan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny ary ambonin'izany rehetra izany noho ny tanjaky ny tontolo iainana Apple ary ny fisondrotanay fitaovana mitentina arivo tapitrisa mahery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Navoaka ny valin'ny telovolana Apple
Heveriko fa lakolosy fampitandremana izany noho ny fampifandraisany amin'ny filan'ny mpanjifa. Ny iPhone SE dia ho fifohazana raha manaraka io fironana io amin'ny vokatra rehetra (endrika tsara, famaritana tsara). Mila fanavaozana ny tsipika Macbook Air, (raha toa ka tsy hanana seranana ny Macbook), ary amin'ny ankapobeny ny tsipika solosaina iray manontolo izay tsy misy fanavaozana Mac mini, iMac, Macbook pro. Raha toa azy ireo ihany ny zavatra mitranga amin'ny Nokia na Blackberry dia tsy noho ny tsy fisian'ny vokatra hisintonana azy.
Apple dia mivarotra iPhones 10 tapitrisa latsaka, ankehitriny inona?
Fantsona famandrihana Apple Watch izay manja